‘सरकार सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्यमा अघि बढेको छ’ SULSULE:A Truly Nepali News Portal
‘सरकार सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्यमा अघि बढेको छ’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकार सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने उच्च लक्ष्यमा अघि बढेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले इतिहासमै पहिलो पटक यति धेरै आर्थिक वृद्धि हुने बताए । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमअफ) को प्रतिवेदनले पनि देखाइसकेकोले वर्तमान सरकार सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने उच्च लक्ष्यमा अघि बढेको बताए । खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीलाई सामूहिक लगानी कोषमा आएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानीको उपयुक्त अवसर भएको भन्दै सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालीले उपयोग गर्न सक्ने र सुविधाका सामान मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट लैजान सबैलाई आग्रह गरे ।
उनले विमानस्थलमा भन्सार जाँचपास सहजीकरण भएको बताए । ठूला मुलुकमा चेकजाँच हुँदा सामान्य मानिने भए पनि हामीकहाँ त्यही चेकजाँचको विषयलाई ठूलो बनाइएको उनको भनाइ छ । विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नेलाई विदेशी विनिमयको हेजिङको व्यवस्था भएको भन्दै सबै देशले पनि पुँजी खाता नियमन गर्ने व्यवस्था भएको उनले स्मरण गरे । करका दरहरु बढेका नभई सुधार गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । मूल्यवृद्धि चार प्रतिशतको वरिपरि मात्र रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धि समग्रमा वैदेशिक व्यापारबाहेक सरकारको वित्त स्थिति राम्रो भएको गैरवासीय नेपालीलाई उनले स्पष्ट पारे । वैदेशिक व्यापार समस्या अहिले सृजना नभएको नभई विगतको संरचनागत समस्यासमेत भएको उनको भनाइ छ ।
विकासका पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको प्रभावले वैदेशिक व्यापारको समस्या र उत्पादनको संरचना परिवर्तन गर्दा व्यापारघाटा देखा परेको मन्त्री खतिवडाले बताए । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरुले नेपालमा लगानीका बारेमा चासो राखेका थिए । २९ र ३० मार्च २०१९ मा नेपालमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि लन्डनमा आयोजित नेपाल विकास सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री खतिवडा मंगलबार लन्डन गएका हुन् । सम्मेलनमा डा. खतिवडाले लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न, समन्वय गर्न तथा नेपालमा आयोजना हुन गइरहेको नेपाल लगानी सम्मेलनलाई समेत सहयोग पु-याउने उद्देश्य छ । । बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजना हुने नेपाल विकास सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताको रुपमा अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । (आर्थिक दैनिकबाट)